Gudoomiyaha Xisbiga Dadka oo qormo xiiso badan ka qoray jahwareerka siyaasadeed ee dalka ka taagan
Baarlamaanka oo xukuumaddu rido waa dastuur cusub oo Khaliijka laga soo alifey. Xildhibaano haya xilalka wasiirada waa qiyaano ku jirta dastuurka ah qabyada.
Madaxweyne aan maareyn karin aqalkiisa waa cudur dib looga fiirsan doono. Raisulwasaare laab maran oo isku miiqaya rug cadaa aan aqoontiisa ergeysi ku bixineyn goobta ay isku helaan la arki doone kalaxiisa ninka kadi loogu shubo.
Isqabsiga sida tooska uga dhexdhaca xukuumadda iyo Baarlamaanka waa mid dowlad dimoqaraadiya dastuurkeeda uu ogol yahay, Waana arrin ugub ku ah dimoqaraadiyada Soomaaliya, maxaa yeelay, inta badan waxaa dhacda isqabsiga madaxweynaha iyo raisulwasaarahiisa, baarlamaankuna waxey u soo dhexgalaan si codkooda ay ugu kala saaraan, inkasto ay caado noqotay iney u hiiliyaan madaxweynaha, meesha laga doonayey iney u hiiliyaan dastuurka.
Tilaabooyinka uu qaaday raisulwasaare Kheyre ma ahan kuwo ku xusan dhaqanka dimoqaraadiyadda.
Horay looma arag xukuumad ka kooban xildhibaano oo sharciyada baarlamaanka ay ka tirsan yihiin mucaarad ku ah. Sidoo kale lama arag raisulwasaare mooshin ka keenaya baarlamaan ka madaxbanaan xukuumadda. Lama arag oo lama maqal raisulwasaare xukuumadiisu awooda baarlamaanka ku horistaagtey ciidamo maleeshiyaada oo loo tababartay caburinta siyaasiyiinta.
Tilaabooyinkaas oo dhan waxey tilmaamayaan xukuumaddu iney xasanada baarlamaanka ay ka xayuubisay oo ay kala dirtay baarlamaanka oo qabsan waayey kulamadiisa, kuwaas oo dhamaantood ku biyo shubanaya in raisulwasaaruhu uu tuuray dastuurka dalka.
Dhacdooyinkaas wixii ka dambeeyana xukuumaddu ay noqotay mid kelitalisa oo xataa diidey shirarka siyaasiyiinta madaxabanaan.
Waxaan ka walaacsanahay xadgudubkaas baaxadda weyn sida looga heshiin karo ama looga gudbi karo ciqaab la’aan. Kheyre intuu isqaadqaadayey ayuu miciyo libaax madaxa gashaday, isagoo rumeysan sida caadiga ahayd inuu halista uu galay ka badbaadayo, sida dhacdooyinkii Bariire, Zoobe, Qalbidhagax, Cabdishakuur, Qeybdiid, Soma Oil & Gas, iyo DP World. Sidaas oo ay tahay ayuu maciin wuxuu biday hadalada raacdo reebka ah oo ay ku taageerayaan laangaabyada maangaabka ah. Laangaab cidii ku talisay in la doorto caqiido xumadoodu waa taas ee ha lagu quusqaato.
Xilka iyo jeebka mabda’ aan ahayn oo ay wax ku raadinayaan ma jiro. Dowlad ku dul nooleyaasha dhismo dowlad qaran laga sugi mayo oo cadaaladdarida iyo dulmiga ay tebenayaan ayey horseed u yihiin hirgelintooda.
Qaa’inka sheeganaya madaxweynaha ayaa awooda maamulka dalka gacanta u geliyey boqortooyo yar oo carbeed, kuwaas oo hogaaminta dalka si toosa uga maamulaya dalkooda, xogaha ay soo uruuriyaana ku awood siinaya qowsaaradooda dabadhilifka u ah.
Waxaan hubaa baarlamaanku inuu ka guuleysan isjiidjiidka khaliijka oo maslaxda Soomaaliyeed ay noqon mida u dambeysa oo guuleysata, Carabtaan qooqan oo shisheeyuhu isku jebinayaan si ay wax uga helaan raasamaalkooda shartooda waa inaan dhinac ka istaagno oo isjebintooda aan sheeda ka fiirsano sida ay iyaguba cudurka, macluusha, iyo dagaalada noogu fiirsadaan.
Farmaajo iyo Kheyre hadda ayey fahmayaan Baarlamaanka inuu isagu wax bedelo ee aan isaga la bedelin. Ha guuleysto baarlamaanka xorta ah, dalkana ha ka xoreeyo kooxda Qiyaano Qaran.
Daanyeer wuxuu eeday dabadiisa guduudan oo waraabe u dareemay hilib bisil oo banaanka yaala. La arki doone Baarlamaanku inuu yahay hilib bisil oo si fudud loo laaco iyo inuu noqdo mariin dugaag oo uu mar kasta soo haweysto.
Xildhibaanadda Qarankow hawshu ha ku socoto sida loogu talagalay oo guri shacab dumiyow mudnaantiisa mariya. Isqaadqaad aan laguu qabin, dhabanoheys dambe ayey leedahay ee godka uu qotay gdino iyo warmo isdhaafa lagu geliyo.
W/Q: Siciid Ciise Mohamud, Gudoomiyaha Xisbiga Somali people’s Party, labadii mar ee u dambaysay ayuu sidoo kale ka qayb galay doorashada Madaxweynaha dalka.
Ciidamo ka tirsan Dowladda oo dhac noocii ugu foosha xumaa ka geystay guri ku yaala Hawlwadaag
DEGDEG: Xildhibaanada Koonfur Galbeed Oo Kulan Deg Deg Ah Ka Leh Mooshinka Laga Keenay Jawaari